कस्तो छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अबस्था ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कस्तो छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अबस्था ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका छन्। रुखाघोकीसहित ज्वरो आएपछि ओलीले बालकोटस्थित निवासमा आराम गरिरहेका छन्।
ओलीले बिहीबार काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको रोयल ब्यांक्वेटमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेका थिए। तर उनी अस्वस्थ भएका कारण आउन सकेनन्।
प्रेस चौतारीले ओलीको उपस्थितिमा बिहीबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर ओली अस्वस्थ भएपछि सो कार्यक्रममा नेता प्रदीप ज्ञवाली सहभागी हुँदैछन्।
एमाले महाधिवेशनपछि धपेडीमा परेकाले अध्यक्ष ओली गम्भीर बिरामी परेको एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए। आज बिहानदेखि उनले कोहीसँग पनि भेटघाट गरेका छैनन्।
निवासमा आराम गरिरहेका छन्। यस्तै एमालेले एउटालाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउँदैमा न्यायालयमा सुधार नआउने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई हटाउने पक्षमा नरहेको बताएको छ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश हटाउने या नयाँ बनाउने खेलमा एमाले नरहेको बताए।
उनले न्यायालयमा नेतृत्व परिवर्तनले मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउँदै न्यायपालिकामा आमूल परिर्वतन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। सर्वोच्च अदालतबाट एमाले सबैभन्दा,
पीडित भएको भन्दै ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका एजेन्डाबाट न्यायालयको सुधार नहुने बताए।
उनले एमाले न्यायिक नेतृत्व हटाउने या राख्ने खेलमा सहभागी नहुने भन्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको एजेन्डा उठाउनेलाई मात्र समर्थन रहने बताए।
आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा एमालेको अवरोध कायम राख्ने उनको भनाइ छ। संसदमा आफहरूले उठाएका एजेन्डाको सम्बोधन,
नभएसम्म संसद् चल्नै नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ। पार्टीले कारबाही गरेका सांसद संसद भवनमा रहेसम्म संसद् नचल्ने उनको भनाइ छ। उनले १०औं महाधिवेशनबाट,एमालेभित्र गुट र उपगुट सकिएको भन्दै अबको तीन महिनाभित्र एमालेले सरकारका नराम्रा कामको भण्डाफोर र पार्टी सदस्यता विस्तारमा केन्द्रित हुने बताए।
तेस्तै, कांग्रेस महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका गगन थापाले जनतासँग वाचा गरेअनुसार काम गर्न नसकेका दलहरूमा अब बाहना नरहेको बताएका छन्।
आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले आन्दोलनपछि प्राप्त राजनीति उपलब्धी भए पनि जनतामाझ गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेको बताए। ‘हामीले जनआन्दोलनपछि ठिक हुन्छ भन्यौँ,त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण, नयाँ संविधानअनुसार राज्यको पुनर्संचना भएपछि ठिक हुन्छ भन्यौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले अहिले जनतामाझ गरिएका वाचा पूरा भएनन्।
राज्यका निकाय कमजोर बने। पाँच वर्ष कम्युनिष्टले सरकार चलाउने र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वास गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुभकामना दिएको भन्दै उनले तर,त्यसअनुसार काम नहुँदा जनतालाई दिने जवाफ नभएको र जनता पनि निराश भएका बताए। ‘पार्टी पुनर्जागरण र रुपान्तरण’ नारा दिएका नेता थापाले अब कांग्रेसले ‘म होइन हामी’ भनेर काम गर्ने बताए।